About Us - Zhejiang Yongyuan Valve Co., Ltd.
Mitsingevana Ball Valve
Zhejiang Yongyuan Valve Co Ltd,-panjakana orinasa ny Zhejiang Yongkang orinasa miditra tsimoramora teo aloha, dia naorina tamin'ny 1967. Noho ny tantaran'ny efa ho 50 taona teo amin'ny tantara, izahay iray amin'ireo mpamatsy ambony ho an'ny valves, voatonona-pirenena minisitry ny milina orinasa , ary ny iray amin'ireo orinasa manan-danja ny orinasa mpamokatra entana miditra tsimoramora ao amin'ny faritanin'i Zhejiang. Ny orinasa nahazo ny lazan'ny orinasa miavaka ao amin'ny faritanin'i Zhejiang, tamberina ihany koa ny nahazo ny fahafaham-po avy amin'ny mpanjifa sy ny raharaham-barotra valisoa ny tsara fampisehoana. Amin'izao fotoana izao izahay filan-kevitra iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny China Valve Association, ary iray amin'ireo orinasa panangonana-pirenena Ball Valve Standard, notendrena ho iray amin'ireo tsara indrindra mpamatsy fitaovana simika Shinoa.
Taratasy fanamarinana ny rafitra fitantanana ISO9001 dia azo tamin'ny 1993, ts fanamboarana fahazoan-dalana (The-pirenena fitaovana manokana ho an'ny fantsona sy ny miditra tsimoramora) tamin'ny 2002 sy API 6D (American Petroleum Institute) 2009.Our fahazoan-dalana ao amin'ny orinasa manana kalitao avo sy rafitra fanaraha-maso ny kalitao vita fanoloran-tena fanaraha-maso ekipa, ny rehetra dia nandinika valves amin'ny API598 na API6D, dia toy izany no afaka manolotra tsara kalitao valves ny mpanjifa. Isika dia hitandrina ny ezaka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy ny mpanjifa manerana izao tontolo izao.
Ny orinasa manarona ny faritra 36569 metatra toradroa, amin'ny 30500 metatra tora-droa ny atrikasa sy mpiasa 218. Misy efatra ambony ianao injeniera, resadresaka roa ambony injeniera, hafa injeniera sy teknisiana 28. Manana tsipika feno ny fitaovana avy amin'ny famokarana, nandinika ny fitsapana, toy ny fasika roa andalana ny fanariana sy roa andalana ny fampiasam-bola fanariana, 208 karazana fitaovana mekanika fikarakarana. Test fitaovana ara-nofo dia ahitana ny spectrometer, tensile Mpamantatra, hamafin Mpamantatra, ultrasonic detector indro kely, hateviny Mpamantatra, vy sarimihetsika Analyzer sy ara-batana sy simika fanadihadiana efitra. Ny famokarana fahaiza-mahatratra 6800 taonina ho an'ny karazana avo, fitaovana sy iva tsindry valves, amin'ny 50 mahery modely sy 600 karazana fepetra arahana. Manana iray-mijanona famokarana fahafahana avy amin'ny fikarohana, famolavolana, fampandrosoana, manorina, fasika fanariana, ny fampiasam-bola fanariana, machining, fiangonana, fizahan-toetra, coating ny fonosana.
Araka ny fanevan 'ny GB, JB, HB, ANSI sy Jis, dia mpanamboatra baolina valves, glaoby valves, vavahady valves, lolo valves, jereo valves, tatatra fandrika, fluor nilahatra valves, pneumatic sy herinaratra etona fanaraha-maso valves, fanampiana valves sy ny samy hafa karazana flange, amin'ny isan-karazany ny akora (firaka vy, hafanana-fanoherana vy, Stainless vy, karbonina vy, ductile vy sy fotsy volo vy), ny manao tsindry dia 1.6-4.8Mpa sy ny mari-pana eto ambany 480C °.
Amin'ny mpiasa ekipa ny tsara sy ny teknolojia avo lenta, ny kolontsaina orinasa tsara isika, dia nanolo-tena ho amin'ny mpanjifa ny hanome kalitao fanompoana, manaraka ny foto-kevitra ny ASA, zava-bita, ny teknolojia sy ny fampandrosoana.
Mba hahazoana ny orinasa fampandrosoana maharitra sy hiara-hitoetra sy mpiara-hambinina miaraka amin'ny mpiara-miasa ny tombontsoa, ​​ny orinasa, nandray ny maha-olombelona sy ny maha-fiheverana, efa nametraka izay rehetra filozofia fandraharahana eto ambany:
1. Human mifantoka
Miavaka ny ekipa no lehibe indrindra fananana. Noho izany, dia efa tena maniry talenta bebe kokoa manatevin-daharana ny orinasa izay hamorona sitraka
afaka karama sy ny tombontsoa sy ny aina miasa tontolo iainana ho an'ny mpiasa mba hanamorana azy ireo hahatakatra ny asa sy ny fanirian-daza, izay afaka mandray anjara ny fahombiazana sy ny manana fahafinaretana mandritra ny asa. Ho anisan'ny anay sy ho anareo afaka mamorona anao manokana asa entin'ny sehatra fanantenana.
2. Customer fahafaham-po
A tena hatsaram-panahy feno vondrona mpanjifa zava-dehibe noho ny raharaham-barotra fahombiazana. Koa izahay, dia nandray ny toetra-antoka tanteraka rafitra mba hamokatra vokatra ny kalitao tsara indrindra sy hanome fahafaham-po ny mpanjifa 'zavatra ilaina. Mandritra izany fotoana izany, dia ataovy foana ny fitarainana avy amin'ny mpanjifa eo amin'ny toerana voalohany ho niteny. Manana ireo mpanjifa ihany no afaka nahatratra ny zavatra efa natao. Tsy ny faniriany sy ny zavatra ilain'ny izay mitarika antsika amin'ny toerana loha isika. Ary araka izany, dia manao ny ezaka rehetra mba hanomezana ny mpanjifa ny vokatra ambony kalitao sy ny asa tsara indrindra ary koa ny fanohanana. Ny hevitra sy ny soso-kevitra dia tonga soa ary foana fifanakalozana fomba fijery amin 'ny mpanjifa, izay hahatonga antsika hitandrina fanatsarana ny soatoavina.
3. Team fanahy
Avo manovaova ny fandaminana anatiny sy ny fanafoanana ny ambaratongam-pahefana afaka mandray anjara amin'ny ny vita haingana ny tetikasa. Matoky isika samy hanatratra ny tanjona sy be nizara sarobidy ny dokambarotra, ny mangarahara sy ny tsy fivadihana eo amin'ny orinasa, mpanjifa sy ny antoko fahatelo mpiara-miasa. Ao anatin'ny fikambanana, dia hanatitra ny mpiasa rehetra ny fandrindrana ilaina, ara-drariny sy ny asa fepetra fanofanana mpiasa fahaizana mba hanampiana azy ireo hitombo.
Adiresy: No.87-89, Mingyuan Avaratra Avenue, Economic Development Zone, Yongkang, Zhejiang Provincem Shina